Bazi reHutano Rinowanisa Vagari neDunhu reHarare Vanoda Kubaiwa Nhomba yePiri yeSinovac
Vanoda kubaiwa nhomba yeCovid-19 yepiri mudunhu reHarare vanonzi vanokwanisa kuenda kuzvipatara zveParirenytwa, Sally Mugabe neChitungwiza
Bazi rezvehutano razivisa kuti rawanira vanhu vari mudunhu reHarare vanoda kubaiwa nhomba yepiri yekudzivirira Covid-19 nhomba yerudzi rweSinovac, uye vanoda kubaiwa vanokwanisa kuenda kuzvipatara zveParirenyatwa, Sally Mugabe pamwe neChitungwiza.
Izvi zvinouya panguva iyo nyika iri kunzi haichina nhomba inoikwanira, izvo zvave kuita kuti kubaiwe vari kuda nhomba yepiri chete.
Asi mutauriri webazi rezvehutano, VaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti zvipatara zvose zvemunyika zvine nhomba yepiri, asi chete kuti chiri kuitika kuibvisa kune dzimwe nzvimbo kwayakawanda ichiendeswa uko kwainodikanwa zvakanyanya.
Izvi zvatsinhirwawo nemukuru anoona nezvehurongwa hweCovid-19 National Taskforce munyika, Dr. Agnes Mahomva, avo vaudzawo Studio 7 kuti munyika hamuna dambudziko renhomba, asi kuti chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kubuda nehuwandu hwavo kunobaiwa nhomba yavo yepiri.
Vati izvi ndizvo zvave kuita kuti pange pane kushomeka kwenhomba uye vati dambudziko iri vari kurigadzirisa kuburikidza nekubvisa nhomba kwaisiri kunyanya kushanda vachiisa kwairi kudiwa zvakanyanya.
Dr. Mahomva vatiwo dzimwe nhomba dziri kutarisirwa munyika mwedzi uno kuitira kurerutsa ndima uye vatendawo veruzhinji nekubuda kwavari kuita vachinobaiwa nhomba yekudzivirira covid-19 iyi.
Vaudzawo nhepfenyuro ye ZBC kuti nyika yakawana nhomba dzinosvika miriyoni imwechete nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 1,735 000, uye kusvika pari zvino kwangoshanda nhomba dzinosvika miriyoni imwechete nezviuru makumi mana kana kuti 1, 000 040, zvichireva kuti nhomba dzichiripo dzinokwana.
Kusvika nezuro musi weChina, vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvina zvine zana nemakumi matanhatu nevana, kana kuti 684 164, vakanga vabaiwa nhomba yekutanga, kuchitiwo vamwe zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nezvina zvine mazana matatu nemakumi mana, kana kuti 364 340, vakanga vabaiwawo nhomba yepiri.
Zimbabwe ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19 munyika.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health, VaItai Rusike vanoti vanotambira chose hurongwa hwekuwaniswa kwenhomba mudunhu reHarare, asi vanopokana nedanho rekutora nhomba kubva kune mamwe matunhu dzichiiswa kune mamwe.
Zvichakadaro, bazi rezvehutano rakazivisa nemusi weChina kuti vanhu vashanu vakafa neCovid-19, uye vamwe makumi matanhatu nemumwe vakawanikwa vaine chirwere ichi.
Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa neCovid-19 hwasvika pachiuru nemazana matanhatu nevana, kana kuti 1 604.
Huwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 kubva zvatanga chirwere ichi hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 39 092.
Huwandu hwevanhu vapora kubva kuchirwere ichi hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu ane makumi masere, kana kuti 36 680.
Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 kusvika nezura vaive mazana masere nevanomwe, kana kuti 807.